ပန်ဒိုရာ: ဟိုရောက်ဒီရောက် နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်
နောင်ဖြစ်လာမှာကို ကြိုတင် တွေးမကြည့်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အစ်မပြောသလို ၀ိုးတိုးဝါးတား ပဲ ဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
သြော်....တယ်လဲ တရားနည်းလမ်းကျပါလား... ဟရို့။
သူကျတော့ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံလောက် အချိန်တွေ ယူခဲ့ပြီးမှ ကျနော့်ကိုကျတော့ နှစ်ရက်အတွင်း အပြီး ရေးရမယ်လို့ ရာဇသံပေးလေတယ်။ တိုင်းမှူးအမိန့်နဲ့ ကြက်ဆူစိုက်ခိုင်းတာ ကျနေတာပဲ။ ဘယ်ရမလဲ။ တော်လှန်ရေးအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ (နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ အကြောင်းရေးဖို့) အနှစ် ၂၀ လောက်တော့ အားယူလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
ဟုတ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ သူများတွေ အောင်မြင်သွားကြတာကို မြင်ရတဲ့အခါ အားကျစရာလည်း ကောင်း၊၊ မုဒိတာပွားစရာလည်း ကောင်း၊ မနာလိုစရာလည်း ကောင်းပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ဖြစ်မလာသေးတာကတော့ ကံပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေ မကုန်ခန်းသရွေ့တော့ ရှင်သန်နေဦးမှာပါ။ ရှင်သန်ခြင်းတွေကို မွေ့ယာချုပ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပဲ မဟုတ်လား...ဟဲဟဲ။
ရေးပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ နောင်လာမယ့် ၂ နာရီအတွင်းမှာ အပြင်ထွက်စရာရှိလို့ ပို့စ်ရေးမယ့်အကြောင်းကိစ္စ ခဏ နောက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့လိုက်ဦးမယ်။
ပန်ပန်ရေ..ကိုယ်တို့ ၅၀ ကျော်ပေါ့....
အရင်အနှစ် နှစ်ဆယ်နဲ့ အခုလက်ရှိအခြေပနေကတော့...
When Wright brothers flew their first plane in 1903, they must have hoped that, that invention will become widespread in future. Now, their dream has come true.
Nothing remains permanent. Change is inevitable.
So let's take one step atatime to make those changes towards our goals.
အနတ္တကြီးစိုးတဲ့ လောကမှာ ဘာကမှ အမြဲမရှိနိုင်ဘူးကိုးဗျာ...
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ပန်ပန်...
အရှေ့ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းကိုလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါတယ်...
ပန်ပန်ပြောခဲ့သလိုပဲ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွက် အတွေးတွေက ဟိုရောက် ဒီရောက်ဆိုပေမယ့် တွေးလေ တွေးလေ မောစရာတွေသာ များနေပါတယ်... ဒီတော့ ကျန်ရှိသလောက် ကိုယ့်သက်တမ်းမှာ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ရှင်သန် နေထိုင် ကြတာပေါ့...။
၂၀၁၂ ကိစ္စကြီးကိုလဲ ရင်လေးတယ်....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မမြဲသောတရာနဲ့ပဲ ကြည့်ရတာပေါ့....
အထူးသဖြင့် ဘဝတူ ဘလော့ဂါ အပျိုကြီးတွေ
နောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွက် စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့..
အင်းလေ... ပန်ဒိုရာစံ ပြောမှပဲ တို့တွေလည်း ခေတ်တွေကို မသိခြင်း ရထားတွေနဲ့ ဖြတ်ကျော် နေလိုက်ကြတာ အိမ်မပြန်ဖြစ်တာ မျိုးဆက်တခု လောက်ရှိနေပြီပဲ။ ပြောင်းလည်းခြင်းကို ချဉ်ခြင်းတပ်ခဲ့ပြီးမှ တိုင်းပြည်အရေး ဝိုးတဝါး ဖြစ်နိုင်လွန်းတယ်။
ငယ်ငယ်က...L.ခွန်းရီ ရဲ့ 1999 သီချင်းထဲ မှာ နောင် အနှစ် ၂၀ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ကို ရင်ခုံ စွာ စောင့်စားခဲ့ဖူးပါရဲ့....
အနှစ် ၂၀ ရှိ လို့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို သာ ပြန်ပြီးဒီသီချင်း
ပန်ရေ ဟိုရောက်ဒီရောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်ပို့ စ်လေးထဲမှာ လေးနက်မှုတွေ ပျော်ဝင်စီးဆင်းနေတယ်… ဒီပို့ စ်လေးထဲမှာ “တယောက်ချင်းမှာ မူတည်နေတယ်။ အားလုံးမှာ မူတည်နေတယ်” ဆိုတာလေးက အနှစ်ပါပဲ… လှပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ဖြစ်ဖို့တယောက်ချင်းပေါ် အားလုံးပေါ်မူတည်နေတာ အမှန်ပါပဲ… လူတဦးချင်းက ကိုယ့်လက်ရှိသက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်မှုကိုပဲ အလေးအနက်ထားပြီး မနက်ဖြန်ကို ကယ်တင်ဖို့မေ့လျော့နေကြရင် မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိလာနိုင်ပါ့မလားလို့တွေးမိတယ်… ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဒီ့ထက်သက်တမ်းရှည်အောင် ကိုယ်ဘယ်လိုများ ကယ်တင်နိုင်မလဲ… စဉ်းစားကြည့်ရင် မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့ထင်ရပေမယ့် တဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်သိတတ်မှုသာရှိခဲ့ရင် တရက်ထက်တရက် အသက်ပိုရှည်လာနိုင်မယ်လို့ထင်မိတယ်… အမရဲ့ အရင်ဘော့စ်ပြောတာ သွားသတိရတယ်… ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာကို ကယ်တင်တဲ့ အနေနဲ့သူ အဲကွန်းလုံးဝ မသုံးတော့ပါဘူးတဲ့… သူ တကယ်ပဲ မသုံးတော့တာပါ… သူအဲလိုပြောတော့ သူများတွေက ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်… နင်တယောက်ထဲ အဲကွန်းမသုံးလို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲတဲ့… တကယ်ဆို သူလို လူတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေးကစလို့ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ချင်တဲ့ စိတ်လေးရှိခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီးလဲ သက်တမ်းပိုရှည်လာနိုင်မယ်လို့အမကတော့ ယုံကြည်တယ်… same concept ကိုပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်သုံးရင် ထွက်ပေါက်တခုဆိုတာ တကယ်ကို ရှိလာနိုင်မှာပါ… လေးလေးနက်နက် တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးသွားတဲ့ ပန့် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွက် ကျေးဇူးပါ ပန်ရေ…
L.ခွန်းရီ ဆိုတာက 1979 မဟုတ်ဘူးလား...
နောက် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ပြန်ဆိုတော့ 1999 လေ...
L ခွန်းရီ ဆိုတာရော ကြားဖူးရဲ့လားကွာ...
(L ခွန်းရီ ဆိုတာရော ကြားဖူးရဲ့လားကွာ...)
ဦးရွှေရတု..လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် ပြောသွားလို့.. ၀င်ပြီး ကီးဘုတ် နှိပ်လိုက်အုံးမယ်။
L ခွန်းရီ ရဲ့ မကြခင်နှစ်တွေက..အင်တာဗျူးတခုမှာ ဖတ်လိုက်မိတာ..သူ့ ရွှေရတု အခွေ ပြန်ထုတ်တော့..( အဲ..ဦးရွှေရတု နဲ့ တူနေပါလား )း)
“ မေမေကလည်း.. ထွန်းအိန္ဒြာဘို သီချင်းတွေ ပြန်မဆို နဲ့လေ.. ”
မှတ်သားစရာတွေ အများကြီး ပါတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ ဟိုရောက်ဒီရောက်ထက် ဘဝအကွေ့ တစ်နေ ရာက နောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ပေါ့ အစ်မပန်ရေ ... ခင်မင်လျှက်
အစ်မ ပန်ဒိုရာရေ မျှော်တွေးတိုင်း မောရပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကိစ္စကိုတွေးမိတိုင်းတော့ အစ်မပြောသလို ပျော်ပျော်ပဲနေမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဖြစ်လာရင်တောင် အားလုံးအတူတူပဲလေ။ တပုဒ်လုံး စဉ်းစားစရာ တွေးစရာ ဗဟုသုတရစရာတွေ အပြည့်ပါပဲ...
နောက်အနှစ် ၂၀ ဆိုရင် ကျမအသက် ၅၀ဝန်းကျင်ရှိပြီ။ နေရသေးရင်ပေါ့
သိလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။
မနက်ဖြန်ဆိုတာတောင် မရေရာတဲ့ ဘ၀မှာ နောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုရင် မသိတော့ဘူးနော် မမ။
အတွေးထက်ထက၊်အရေးသွက်သွက်နဲ့ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်..ဆင့်ပွားခံစားလို့ ကောင်းတယ်..။
အနှစ် ၂၀ကတော့ အနှစ်၂၀ပေါ့လေ..။
ကျနော်ကတော့ အနှစ်နှစ်မှာ အနှိပ်ကလေးတွေ အယောက်နှစ်ဆယ်နဲ့ လန်းနေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ..။ လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတာ ဝေးပါတယ်။ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင်ဘာမှာတော့ ကမ္ဘာပျက်မယ်ချည်း အော်နေကြလို့ အနှစ်နှစ်ဆယ်မရောက်ခင် မာယာပြက္ခဒိန်ထဲက အဲဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာ ဂိကုန်ရင်တော့ ...
နှစ် ၂၀ ဟာ